Xulka ciyaartoyda Shataranjiga Soomaaliya oo la ciyaaray shan dal tartanka All Arab Games | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Xulka ciyaartoyda Shataranjiga Soomaaliya oo la ciyaaray shan dal tartanka All Arab Games
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) iyo koox ciyaartoy ah oo uu hoggaaminayo kana qeyb gelaya tartanka dalalka Carabta All Arab Games oo ka socda magaalada Doxa ee wadanka Qadar ayaa faahfaahin ka bixiyay ciyaar ay la yeesheen qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Waxa uu sheegay in maalinimadii doraad ciyaartii ugu horeysay ay la ciyaareen ciyaartooyda Shataranjiga wadanka Falastiin ayaa xulka Soomaaliya waxay ka soo hooyeen guul, ciyaartaas oo loo yaqaano Biltizka.
Ciyaartii labaad ee ay isugu soo baxayeen dalalkii ka qeyb gelayay tartanka All Arab Games oo iyana loo yaqaano nooceeda Raabidka ayaa xulka Soomaaliya waxa uu muujiyay firfircooni iyo dadaal dheeraad ah, hase yeeshee wadamadii uu la ciyaaray midkoodna kuma guuleysan inuu ka badiyo.
Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Wataac ayaa sheegay in dhinacooda ay ka badiyeen dalalka Sudan, Iraq, UAE iyo Libiya, isagoo sheegay in ciyaartoyda dalalkaasi ka socota ay ahaayeen kuwo nasiibku saaciday ee aanay ku badin xirfad ciyaareedka Shataranjiga.
Ciyaarta Chess-ka ee laga badiyay ciyaartoyda Soomaaliya ayaa ahayd nooca loo yaqaan Raabidka, hase yeeshee garsoorayaasha ciyaarta ayaa ku ammaanay dhammaanba kooxaha Shataranjiga ee ka qeyb gelaya tartanka All Arab Games inay yihiin ciyaartoy firfircoon oo marka dhinac kasta laga eego ay ahaayeen kuwo u soo diyaar garoobay.
Xulka ciyaartoyda Shataranjiga Soomaaliya oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa Laacibka C/raxmaan Cumar Sheekh oo isagu dhinacooda dhulka dhigay xulka wadanka Falastiin ayaa sidoo kale waxa uu wacdaro layaab leh ka dhigay kooxihii kale ee ay wada ciyaarayeen.
Waxaa noo dhiman tartamo kale oo aan la ciyaari doono ciyaartoyda ka socota dalalka Carabta, anigoo rajeynaya inaan ka soo hoyno guulo taariikhda gala” ayuu yiri Guddoomiye Wataac oo sheegay dhinaca kale in dhinaca kale tartanka sanadkaan ee All Arab Games ay ka heleen waaya aragnimo iyo xeelado cusub oo ku saabsan ciyaarta Shataranjiga.
« Ururka SYL2 oo arday u furay tababarka ciyaarta Shataranjiga + Sawirro
Doorashada Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga oo la shaaciyay xilliga ay dhaceyso »